Mon, Apr 23, 2018 | 17:11:02 NST
नेपालका अस्पतालमा गए उपचार मात्रै पाइन्छ तर बाहिर गए उपचारका नाममा घुमघाम र भत्ता पनि पाइन्छ अनि किन नजाउन त ?
सुन्नेहरुको सुझावका आधारमा उज्यालोले खेलकुद विशेष कार्यक्रम स्पोर्ट विक सुरु गरेकोमा धेरै खुशी लाग्यो ।
राहुल पाठक भोटको राजनीति गर्न वर्ष दिनअघि सरकारले तँछाड मछाड गर्दै नगरपालिका घोषणा गरे तर अब चुनाव हुँदा ति नगरपालिका कता विलय हुने हुन् थाहा छैन । २ वर्षपछि के होला भनेर पनि सोच्न नसक्ने सरकारले ५० वर्षपछिका सपना देखाउनु लाजमर्दो कुरा हो ।
दुई पटक मन्त्री परिषद् विस्तार भयो तर पनि पुर्णता पाएको छैन । सरकारले पुर्णता पाउन नै ९ महिना लाग्ला जस्तो छ । अनि यो सरकारले नागरिकका लागि के गर्ला अनि हामीले आशा गर्ने ?
हुम्लामा सडक यातायात नहुँदा हामीले धेरै समस्या भोगेका छौं, हुम्लाको तिहुम्ली गाउँमा सडक बनाएर गाडी चलेको हेर्ने सपना कहिले पुरा होला भनेर हामी सरकारको बाटो हेर्दैछौं, तर सरकारको अत्तोपत्तौ छैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जीलाई सुझाव छ, यसअघि आफुसँग अनुभव नभएकाले काम नगरेपनि अब देशमा राम्रोसंग विकास गर्ने भन्नुभएको छ । यसका लागि दक्षिणी छिमेकीतिर चाहिँ नधाउनुहोला ।
हरियो वन नेपालको धन भनिन्छ तर यसलाई सरकारले सहि ढंगले उपयोग गर्न सकेको छैन । मेचीदेखि महाकालीसम्मको वनमा बुढा भएका खरबौं रुपैयाँका रुखलाई व्यवस्थापन गर्न सके विकासका काममा खर्च गर्न सकिन्थ्यो ।
सरकारले किन डाक्टर गोबिन्द केसीको माग पूरा गने नसकेको होला ? केसीको स्वास्थ्य झनझन विग्रिँदैछ । तर सरकारलाई केहि वास्तै छैन । के डाक्टर केसी र नागरिकको माया छैन ?
देशको विकास हुनका लागि राजनीतिक अस्थिरता होइन, स्थीरता आवश्यक छ । तर हाम्रो देशमा सधै राजनीतिक संक्रमण किन ? यसरी कसरी हुन्छ विकास ? छिमेकी देशलाई हेरेरै भएपनि केही सिक्ने की !!
ठाउँठाउँमा सिमाना मिचिँदैछ, तर नेताहरु चाँहि आपसी झगडामै व्यस्त छन । हैन यो राजनीति साँच्चै नागरिककै लागि हो त ?
हिजो आज अनुगमन समितीले नियमित बजार अनुगमन गरिरहेको खबर सुनेर धेरै खुसी लागेको छ, तर यस्ता अनुगमन खाद्य पदार्थमा मात्र नभइ विकास निर्माणका काममा पनि हुनुप¥यो । किनकी हिजोआज ओभरसियर र ठेकेदारको मिलेमतोमा कमसल काम गरि रकम कुम्ल्याउने काम बढेको छ ।
नागरिकले अझै पनि सजिलै गरेर ग्यास पाउन सकेका छैनन् । फरक फरक कम्पनीका सिलिण्डर भएकाले पनि समस्या भएको हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो । त्यसैले सरकारले ग्यासका सबै कम्पनीलाई एउटै बनाउन सके सजिलै पाउन सकिन्थ्यो की ।
जमिन्दारको नाममा सयौं विगाहा जमिन छ तर उत्पादन गर्न खोज्ने किसानको नाममा १ कठ्ठा जमिन छैन । जमिन्दारको जमिन बाँझो हुन्छ तर किसानले किनेर खानुपर्छ । के यस्तै पाराले अन्न निर्यात गर्छ कि आयात ?
अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायले कसैको मर्यादामा आँच आउनेगरि विज्ञप्ती निकाल्नु गलत हो । डाक्टर गोविन्द केसीलाई लगाएका आरोप अख्तियारले पुष्टी गर्न सक्छ ? अख्तियारले समातान्तर सरकारको अभ्यास गरेको छ ।
हाम्रो देशमा एउटा सरकारले राम्रो गर्न खोज्यो भने अर्काले खुट्टा तान्ने चलन छ । विकास निर्माण र सुशासनको जग बसानेउलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा सडकदेखी सदनसम्म विरोध हुन्छ, अनि खुट्टा तान्नेहरु नै भन्छन देश समृद्ध हुन सकेन ।
सरकारले शिक्षकको तलब त बढायो तर पुस्तक नपाएर विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन् । शिक्षकको तलब बढाएर मात्रै शैक्षिक गुणस्तर सुध्रने हो र सरकार ? पैसा बाँडेर केही जनाको धन्यवाद सरकारले केहीको धन्यवाद पायो तर पुस्तक बाँडेको भए लाखौं विद्यार्थीको धन्यावाद पाउँथ्यो ।
​ सरकार परिवर्तनले देशको समस्या समाधान हुदैन । यसले त अस्थिरतामा मात्रै ल्याउँछ । कि संविधान कार्यान्वयन नगर्नलाई हो सरकार परिवर्तनको कुरा ल्याएको ।
प्रदेश तीनका सांसदको पोशाक र लोगो तोकियो
मकवानपुर, वैशाख १० – प्रदेश नम्बर तीन कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले सांसदहरुको लागि पोशाक र लोगोको निर्धारण गरेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री माेदी वैशाख २८ गते नेपाल आउने पक्का
​मोदीले केही दिनभित्रै जनकपुरको भ्रमण गर्नु हुन्छ : भारतीय राजदूत पुरी
​यस्तो बफादार कुकुर : जसले हराएकी तीन वर्षीया बालिकालाई १६ घण्टासम्म कुरेर बस्यो
​कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : महत्वाकांक्षी योजनाका चाङ
​किन बन्द गर्‍याे दक्षिण कोरियाले उत्तरतर्फ फर्काएर राखेका स्पिकर ?
मिस नेपाल भन्छिन् – म राम्री होइन, सबै नारीको प्रतिनिधि पात्र हुँ (भिडियो कुराकानी)